बाइबलले मलाई कसरी मदत गर्न सक्छ?
बाइबल भन्छ: “धर्मशास्त्रमा भएका सबै कुरा परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो।” (२ तिमोथी ३:१६) यो कुरा साँचो हो भने बाइबलले तपाईंलाई आवश्यक डोऱ्याइ दिन सक्छ।
कल्पना गर्नुहोस्: निष्पट्ट अँध्यारोमा दिवश हिंडिरहेको छ। अँध्यारो भएकोले उसले ठाउँ चिन्नै सकेन र ऊ हराउँछ। उसले गलत मोड लिएकोले हिंड्‌दा हिंड्‌दै बाटो हराएको हुनुपर्छ।
तपाईं दिवश हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो?
तपाईंसँग थुप्रै उपाय छन्‌:
१. बाटो पत्ता लगाउन कसैलाई सोध्ने।
२. टर्चलाइट प्रयोग गर्ने।
३. पत्ता लागिहाल्छ नि भनेर हिंडिरहने।
तेस्रो तरिका सबैभन्दा कम प्रभावकारी हुन्छ।
दोस्रो तरिका पहिलोभन्दा फाइदाजनक छ। किनभने यात्राभरि टर्चलाइटले तपाईंको बाटो उज्यालो बनाइदिन्छ।
बाइबलले पनि तपाईंलाई यसरी नै मदत दिन्छ!
सबैभन्दा लोकप्रिय किताब बाइबलले के-कस्तो मदत दिन सक्छ?
जीवनका समस्याहरूको सामना गर्न आवश्यक सल्लाह दिन्छ
आफू कस्तो व्यक्ति हुँ भनेर बुझ्न अनि असल व्यक्ति बन्न मदत गर्छ
उत्तम जीवन कसरी पाउने भनेर देखाउँछ
जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुहोस्
बोली फुटेदेखि नै हामी विभिन्न प्रश्नहरू गर्न थाल्छौं।
आकाश किन निलो हुन्छ?
ताराहरू किन चम्कन्छन्‌?
तर ठूलो भएपछि आफू वरपर भएका कुराहरूबारे प्रश्न गर्न थाल्छौं।
खराब कुराहरू किन हुन्छन्‌?
यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ बाइबलले दिन्छ।
थुप्रैको विचारमा बाइबल दन्त्य कथाहरूले भरिएको, पुरानो जमानाको अथवा बुझ्नै नसकिने किताब हो। के बाइबल साँच्चै यस्तै किताब हो? अथवा यो बाइबलबारे मानिसहरूको सोचाइ मात्र हो? बाइबलबारे उनीहरूलाई गलत जानकारी पो दिइएको हो कि?
उदाहरणको लागि, मानिसहरूको विचारमा यो संसार ईश्वरको हातमा छ। तर के यो साँचो हो? यो संसार दिन-प्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको छ। जताततै आँसु अनि पीडा, रोग अनि मृत्यु, गरिबी अनि प्रकोप। हामीलाई माया गर्ने ईश्वरले के त्यसो गर्लान्‌ र?
के तपाईं यसको जवाफ थाह पाउन चाहनुहुन्छ? यो संसारको शासक को हो भन्ने विषयमा बाइबलको जवाफले तपाईंलाई छक्कै पार्नेछ!
यस पुस्तिकामा दिइएको सल्लाह बाइबलमा आधारित छ भनेर तपाईंले याद गरिसक्नुभयो होला। डोऱ्याइको लागि भरपर्दो स्रोत बाइबल नै हो भन्ने कुरामा यहोवाका साक्षीहरू विश्वस्त छन्‌। किनभने बाइबल ‘परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो र यो सिकाउन, सुधार्न, सच्याउन उपयोगी छ।’ (२ तिमोथी ३:१६, १७) बाइबल धेरै अघि लेखिएको भए तापनि यसमा पाइने जानकारी आधुनिक समयको लागि उपयोगी छ। तपाईं पनि यस अद्‌भुत किताबलाई जाँचेर हेर्नुहोस्।
www.jw.org/ne मा बाइबल किन पढ्‌नुपर्छ? भन्ने भिडियो हेर्नुहोस्।
तपाईंले कहिल्यै यस्तो भन्नुभएको छ: ‘म असाध्यै व्यस्त छु।’ वा ‘बाइबलअनुसारै जीवन बिताउन सकिंदैन कि जस्तो लाग्छ।’
संसारभरि नै यहोवाका साक्षीहरू निश्‍शुल्क बाइबल अध्ययन गराउने व्यक्‍तिहरू भनेर चिनिन्छन्‌। यो काम कसरी गरिन्छ, थाह पाउनुहोस्‌।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने बाइबलले मलाई कसरी मदत गर्न सक्छ?
बाइबल​—⁠परमेश्वरले दिनुभएको किताब (भाग २)